Tsy mitsaha-mirongatra ny Coronavirus: avy eto Antananarivo ny 83 amin’ireo tranga vaovao 84 | NewsMada
Tsy mitsaha-mirongatra ny Coronavirus: avy eto Antananarivo ny 83 amin’ireo tranga vaovao 84
Tsy mbola nisy tahaka ity hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Tafakatra 84 ireo nifindran’ny valanaretina covid-19, araka ny antontanisa navoakan’ny CCO, omaly. Avy eto Antananarivo avokoa ny 83 amin’izany ary iray kosa ny avy any Toamasina. Manampy trotraka izany ireo namoy ny ainy noho ny valanaretina miisa roa tao anatin’ny 48 ora. Vakivava sy nanaiky hatramin’ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololontiana Hanta. « Tena mampieritreritra izao tranga izao ka tokony samy handray andraikitra ny tsirairay », hoy izy.
Miisa 543 ny fitiliana nataon’ny IPM sy ny CICM ary ny laboratoara vaovao LA2M, etsy Androhibe ka nahazoana ireo antontanisa ambony be amin’ny tranga vaovao 84 ireo.
Na izany aza, nisy 44 ireo sitrana sy nalefa nody rehefa nahafeno izany fepetra izany.
Tafakatra 1724 izany izao ireo tratran’ny covid-19. Miisa 978 ireo mbola tsaboina ary 732 ireo sitrana. Miisa 11 ireo marary mafy « forme grave » ary 15 ireo namoy ny ainy noho ity valanaretina ity. Nahavita fitiliana 19027 ireo laboratoara eto amintsika.
Hosamborina ireo mitangorongorona…
Manoloana ireo, hentitra ny fepetra noraisin’ny CCO foibe manomboka izao, rehefa avy namory ireo lehiben’ny boriborontany enina sy ireo sefo fokontany 192. « Hosamborina ireo mitangorongorona amin’ny adin’akoho sy ny ankizy milalao baolina… », hoy ny mpandrindra ny CCO, ny Jly Andriankaja Elack Olivier. Haverina hoatry ny tany amin’ny voalohan’ny fihibohana ny fandraisana ny fepetra rehetra. Anisan’izany ny tsy maintsy anaovan’ny rehetra ny arotava…